fampianarana — Trip LEE - OFISIALY SITE
Izany no hafatra fohy avy Advance College Conference in Raleigh, NC. Azonao atao ny mamaky ny sora-tanana ambany:
Te-hiresaka aminareo mikasika ny kely indrindra mampiasa ny fanomezam-pahasoavana noho ny voninahitry ny Jesosy.
Efa nahare ankizy mametraka fanontaniana? Manana ny mahagaga te hahafanta-javatra izay toa tsy misy farany. Izany ody fanontaniana “Nahoana” afaka mandeha eo mandritra ny ora maro sy ny ora. Manana namana izay ny ankizy any dingana ity amin'izao fotoana izao. Tsara dia toa hoe misy zaza io noho ny olona izay tia ny manontany ny antony, saingy tsy momba ny fanontaniana saro-takarina, fa momba ny zavatra andavanandro.
Aho dia tsy tena mora antony. Misy olona sasany izay mazava ho voaroaka, ary ny zava-misy fa misy zavatra tokony hatao atao dia ampy antony manosika ho azy ireo. Ny vadiko dia iray amin'ireo olona; Izaho dia tsy.
Mba ho ahy ny mahazo na inona na inona vita, Mila ny heviny izay aho manao zavatra lehibe. "Fa raha izaho no hahafaka izany fako avy, dia ny fako ny olona hovonjena?"Aho sary lehibe lehilahy, ary zara raha voasarika aho amin'ny antsipirihany na mandreraka asa. Indrisy, tsipiriany sy ny asa mandreraka dia ny ankamaroan'ny tena fiainana. Izany angamba no antony niady mafy…
Manan-danja ve izany i Jesosy raha Rose?
Tsara isika manodidina andro izany ny taona. Iray amin'ireo fotoana roa maro isika hankany amin'ny Neny ny fiangonana, na hitafy ny akanjo tsara Paska sy ny loha tsy mahazo manao trano fiangonana teo akaiky teo. Fantatro ny sasany y'all efa manana ny Paska sy ny akanjo palitao naka avy.
Toa olon-drehetra mahazo mandray anjara amin'ny fankalazàna. Krismasy sy Paka ireo mahaliana fotoam-taona na dia ny olona izay matetika no tsy miraharaha momba an'i Jesosy mahazo anjara amin'ny fomba. Misy ny Paka sy ny Paska vatomamy atody amidy eny rehetra eny. Misy fandaharana Paska, ary matso. Paka maka mihoatra ny kely, na dia maro aza no tsy mino ny Paska tantara.
Tsy mahagaga anefa ny Paska sy Krismasy satria lasa hetsika ara-kolotsaina. Izy efa nivadika ho kely kokoa noho ny firenena fety, family fihaonana, ary fahafahana ho an'ny mpaninjara mba hahatonga ny sasany vola bebe kokoa. Mazava ho azy, ireo izay mino ny fahaterahana sy ny fahafatesan'i Kristy mankalaza fa, saingy tsy takiana.
Tsaroako ny nitombo ny fianakaviako dia mandeha ho an'ny rehetra ny Paska. Te handeha izahay any amin'ny tsenambarotra ny herinandro talohan'ny ka maka sary miaraka amin'ny Paska Bunny. Izaho manokana dia mihevitra fa no creepiest rehetra ny fialan-tsasatra mascots. A goavana…
Iza aho? Pt. 2: nolaniana
Tamin'ny fotoana sasany dia nametraka fanorenany eo amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny maha-. Niresaka mikasika ny zavatra mahatonga ny maha zava-dehibe; indrindra fa raha toa ka tsy fantatsika hoe iza isika, dia tsy mahay isika tokony hiaina. Ary avy eo isika dia niresaka momba ny fomba tsara isika natao, fa torotoro. Ary noho ny brokenness isika tafasaraka amin'Andriamanitra sy mila ny Mpamonjy.
Io maraina isika dia handeha hiresaka tsara tarehy iray amin'ireo fahamarinana mikasika ny famonjena avy amin'Andriamanitra, izay fananganana. Tamin'izay fotoana izay anefa, ny fifanakalozan-kevitra ny maha-mpiasa miasa kely. Ny zavatra rehetra dia niresaka momba ny farany night- fa isika nataon'Andriamanitra, fantatra ny amin'Andriamanitra, tapaka, sy ny malahelo-marina ny olona rehetra amin'ny tany. Ny zavatra isika dia handeha hiresaka momba ny fotoana izao dia zavatra izay marina ny ireo izay ao amin'i Kristy. Izahay izao miresaka momba ny fomba ny maha miova rehefa lasa Kristianina
Vao haingana aho no namaky ny tantaram-piainany ny Steve Jobs, ny mpanorina sy ny mpahita fahitana ao ambadiky ny Apple, orinasa lehibe indrindra eo amin'izao tontolo izao. Tena mahaliana tokoa ny mamaky satria ny manam-pahaizana…
Vao avy nijery izany Ja Rule resadresaka omaly. Izy miresaka momba ny zavatra niainany amin'ny fiangonana. Ao amin'ny fiangonana foana ny zavatra niainany hoy tonga rehefa…
Olon-dehibe dia toy izany koa. Matetika izahay OK miaraka manao zavatra isika dia tsy tokony hanao, raha mbola ny olona tsy maintsy mamaly ny tsy hahita. Faly ianao mba hanafaingana mandra mahita polisy mialoha. Angamba faly izahay hiala ny asa tany am-boalohany, raha mbola toy ny mpampiasa tsy hahita. Angamba ny sasany amintsika hamitaka ny fitsapana raha mbola maharitra koa ny mpampianatra tsy hisambotra…
Rehetra ilaintsika dia ao amin'Andriamanitra
Tahaka ny sasany tamin'ireny fantatrao, Aho raim-pianakaviana vaovao. Ny zanako lahy, Q, dia dimy volana. Ary izy no faly foana, afa-tsy rehefa nataony tao ny fihinanam-bilon'ny ny torimaso. Izy avy hatrany very ny sainy. Zava-dehibe dia mihevitra izy efa nandao azy isika mba hiaro tena ho an'ny tenany hanohitra ny zava-tsarotra rehetra manodidina azy, toy ny harerahana sy mila ny nanolo niova.
Fa indray andro dia nahita ny fifaliana ny mbola minono eo amin'ny tànany. Tena mampitony ny tena zava-kevitra izy avy. Ary rehefa mametraka ny tànany teo am-bavany - ary tena shoves izany tao ka - dia manadino ny fahoriany rehetra. Tsy tena manova ny zava-misy fa nandao azy irery ao amin'ny efitrano, fa ny tànany no mahatonga azy hanadino ny momba izany.
tsara, Fantatro fa ny olona rehetra eto amin'izao fotoana izao dia manana olana lehibe kokoa noho ny matory irery tao amin'ny efitra iray. Tsy manam-bola olana, fanambadiana olana, olana ara-pahasalamana, sy ny sisa. Ary toy izany koa ny zanako, isika indraindray hitady fomba hiatrehana ny olana. Tsy te-hahatsapa fa ny fanaintainana sy ny fahoriana. Noho izany dia mitodika amin'ny zavatra izay hahatonga antsika manadino izany. Anefa dia ny fomba tsara indrindra hiatrehana izany? fialamboly?
Teny manan-danja. Mampiasa teny mifandray amin'ny Raintsika namana sy ny fianakaviana. Mampiasa ny teny isika hitondra raharaham-barotra. I mampiasa teny mba hametraka hira miaraka ary manao ny velona. Mampiasa teny mba manafay ny zanany. Ireo mpanao politika mampiasa teny mba handresy lahatra anao fa ry zareo ny tsara indrindra ho kandidà ny asa. Teny dia be anisan'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Manana zanaka vaovao. Sarotra ny miaina miaraka amin'ny olona fito herinandro antitra, indrindra indrindra satria izy ireo tsy afaka miresaka. Ary indraindray aho te hanampy azy, fa tsy mahalala satria tsy afaka mifampiresaka amin'ny teny mbola. Sarotra ny sary an-tsaina ny tontolo tsy misy teny.
Ny eo ho eo ny olona momba 16,000 teny isan'andro. Izany no 112,000 teny isan-kerinandro. Izany no maherin'ny dimy tapitrisa isan-taona teny. Mampiasa teny. Betsaka.
Ary na inona na inona fa misy be dia be nanomboka ho undervalued. Ny zava-dehibe ny zavatra fanovana mifototra amin'ny tena ny zava-. Rehefa misy 100 mofomamy eo amin'ny latabatra taorian'ny asa fanompoana izay mety miresaka foana nandritra ny fotoana kelikely. Fa rehefa misy vitsy monja mofomamy, dia toa sarobidy. Ianao angamba maika erỳ ary raha mahazo ny iray amin'ny fotoana, fa…
Tsara ny Fanekem-pihavanana Vaovao, izay ny andinin-teny miresaka momba ny anio alina, dia efa tahaka ny remix. Lazaiko fa satria mampanantena Andriamanitra mba hanaovako fanekena vaovao amin'ny ny vahoakany, fa ny zava-drehetra momba izany dia tsy vaovao. Ny toetrany Tsy miova, Ny fampanantenany Tsy niova, Ny ankapobeny fikasana tsy niova. Fa misy ny zavatra sasany momba izany fanekempihavanana izay…
Tsy voatery ho miverena amiko. ao amin'ny Eksodosy 17, ny olona Isiraely maka fanahy an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny manao zavatra toy ny raha tsy matoky Azy. Rehefa avy ny zava-drehetra dia ny nataony ho azy ireo, mahatonga azy ireo ny vahoakany, nanolotra azy ireo tamin'ny fanandevozana, manome ho azy ireo sy ny sisa, dia mbola tsy matoky Azy. Dia niady tamin'ny…
Jesosy, feno ny Fanahy Masina, niverina avy tany Jordana, ary nentin'ny Fanahy tany an-…
Azonao atao ihany koa ny miresaka momba ny mpanakanto tahaka an'i Lil Wayne. Misy rappers izay sitrakao fotsiny mantsy ny ho olo-malaza sy manangom-bola. Tsy Lil Wayne. Tiany ho ny lehibe indrindra amin'ny…